Iindaba - Shirt yePolo
Ekupheleni kwenkulungwane ye-19, imisebenzi yangaphandle yabaluleka kwiklasi yolawulo lwaseBritane. I-Jodhpur ibhulukhwe kunye neehempe ze-polo zaba yinxalenye ye-wardrobe yezemidlalo enxulumene nehashe. Ihempe zangokokuqala zeepolo zazifana neqhosha langoku phantsi kwezikipa zemidlalo. Babenamaqhosha, iihempe ezinde okanye ezinemikhono emifutshane, zahlulwa ngokwenziwa kwezinto ezirhabaxa kuneehempe zokunxiba kunye neekhola ezantsi ezinamaqhosha ukuthintela iikhola ukuba zingangqushi xa zihamba ngehashe. Ngesi sizathu, iBrooks Brothers ithengisa umgca weqhosha le-oxford phantsi kwehempe njenge- "Polo yoqobo."
Ihembe lepolo luhlobo lwehempe enekhola, intamo yeplacket enamaqhosha amabini okanye amathathu, kunye nepokotho yokuzikhethela. Ihempe zePolo zihlala zinemikhono emifutshane; zazisetyenziswa ngabadlali bePolo kwase-India ngo-1859 nase-Great Britain ngo-1920.
Ihempe zePolo zihlala zenziwe ngomqhaphu obhijiweyo (endaweni yelinen ephothiweyo), ihlala iyilaphu le-piqué, okanye inqabile into edityanisiweyo. imerino yoboya, imicu yokwenziwa, okanye imixube yemicu yendalo kunye neyokwenziwa. Inguqulelo yobude behempe ibizwa ngokuba yingubo yepolo.
Sivelisa ihempe yepolo ngokokulungiswa ngamanye amaxesha, kwaye okwangoku, sivelisa ezinye iindlela ezithandwayo ezinemibala eqhelekileyo yaMadoda naBantwana, njengombala omhlophe, umbala omnyama, umbala omdaka ongwevu, umbala we-navy, umbala obomvu. Ezihempe zepolo, sivelisa kwangaphambili, kwaye ukuba abathengi bethu bafuna siyile ngoshicilelo oluthile kunye nokuhombisa, siya kubonelela ngeendlela ezinokufuneka, ngale ndlela, singanikezela ngehempe ngokukhawuleza kubathengi bethu, ngakumbi ehlotyeni. , oku kubaluleke kakhulu.